Xildhibaan Ilhaan Cumar Oo La Ganaaxay – somalilandtoday.com
Xildhibaan Ilhaan Cumar Oo La Ganaaxay
(SLT- Minnesota)-Xildhibaan Ilhaan Cumar oo ka tirsan Congress-ka Mareykanka ayaa lagu eedeeyay in dhaqaalaha ololihii doorashadii Mareykanka u adeegsatay si gaar ah.
Guddiga maamula dhaqaalaha ee Minnesota ayaa sheegay inay jebisay xeerka gobolka, waxayna saareen ganaax lacageed.
Guddiga ayaa sheegay in Ilhaan ay isticmaashay lacag gaadheysa $3,500 oo dollar oo ay ku bixisay safar ay ku tagtay Florida iyo qeyb ay ku bixisay canshuur celintii ay sameysay.
Sidoo kale, waxaan Ilhaan lagu helay in $1,500 oo dollar, lagu bixiyay arrimo la xiriiray sixidda cashuur celinteeda, taas oo aan la xidhiidhin ololihii doorashada. Waxayna dalbadeen in la soo celiyo. Waxaana la saaray ganaax gaadhaya $500 oo dollar.